ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ ဖြစ်စေသောအကြောင်းများ၊ ပျောက်ကင်းစေသောနည်းလမ်းကောင်းများ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ ဖြစ်စေသောအကြောင်းများ၊ ပျောက်ကင်းစေသောနည်းလမ်းကောင်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဆိုတာ အမျိ ုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အထူးအရေးပါတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာလေးကတော့ ဝမ်းလျှောခြင်းအကြောင်းပေါ်အလေးပေးပြောထားပေးပါတယ်။ ဝမ်းလျှောခြင်းဆိုတာမိခင်ကောကလေးကိုပါ ထိစေတဲ့အဖြစ်များတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ပေမယ့် သင်ကပုံမှန်ရိုးရိုးလူပါပဲ ဒါကြောင့်သင့်မှာလည်းပုံမှန်လူတွေလိုပဲ ပြသနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကနေ သို့မဟုတ် အစားအဆိပ်သင့်ခြင်းကနေရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဝမ်းအကြာကြီး ချုပ်နေပြီး ရက်တွေကြာပြီးမှဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။၎င်းကို ဝမ်းအတုံးများပိတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။
ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စားသောက်မှုပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ကကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ ကလေးတွေအတွက်အာဟာရဓါတ်တွေပိုရနိုင်ဖို့ သင့်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေက တစ်ခါတစ်လေမှာဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်က ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တာကြောင့် အစားအစာ တစ်ချ ို့ကိုမတည့်တော့ပဲနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိ ု့သောအစားအစာတွေက သင့်အစာအိမ်ကို နေထိုင်မကောင်းဖြစ်စေပြီး ဝမ်းလျှောစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းတွေကလည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က မွေးခါနီးဖွားခါနီးအသုတ်ထဲရောက်နေပြီး ဝမ်းလျှောခြင်းကို ခံစားတွေ့ကြုံရပါက အဲ့ဒါဟာ မီးဖွားခြင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်က သင့်ကလေးအတွက် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရပြီဆိုရင် တစ်ချို့သောဆေးတွေက ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဆေးတွေကို အသုံးမပြ ုချင်ပဲဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းက ဘာကုသမှုမှမပါပဲ ပျောက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ပျောက်ဖို့ကြာနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မပျောက်ဘူးဆိုပါက ဆိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ အချို့သော ပျောက်ကင်းစေသောနည်းလမ်းများကို ကြိုးစားကြည့်လို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့သင်ကဝမ်းလျှောတာကိုခံစားရပါက သင့်ရဲ့ရေဓါတ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် သင့်ကို ပိုပြီးပင်ပန်းသလိုခံစားရစေမှာပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်က ရေဓါတ်အမြဲပြည့်နေဖို့အတွက် အရည်တွေအများကြီးသောက်သင့်ပါတယ်။ ရေသောက်ခြင်းကတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ တစ်နေ့ကို ရေဖန်ခွက် ၈ခွက်မှ၁၀ခွက်ထိသောက်ပေးပါ။ တစ်ခြားအရည်တွေဖြစ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊smoothies ဒါမှမဟုတ် နွားနို့များ သောက်နိုင်ပါတယ်။
သွက်သွက်လက်လက် နေခြင်းက သင့်ကိုယ်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပိုပြီးနေလို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရစေမှာပါ။ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ လမ်းခပ်မြန်မြန်လျှောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ယောဂ ဆော့ချင်းတို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကိုတော့ တအားတွန်းအားမပေးပါနဲ့။
သင့်အစားအသောက်တွေကို အာရုံစိုက် ဂရုစိုက်စားသောက်နေထိုင်ပါ။ ပိုးသတ်မထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို မစားပါနဲ့။ သင်မစားခင်မှာ အစားအစာတွေကို ဂရုတစိုက်ဆေးကြောပါ ချက်ပြ ုတ်ပါ။ ညစ်ပတ်တဲ့အစားအသောက်တွေဟာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေပါနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကနေမှ ဝမ်းလျှောစေနိုင်ပါတယ်။
သက်တောင့်သက်သာအနားယူခြင်းက သင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ ခံစားရစေမှာပါ။ အရမ်းကြီး မတွေးပါနဲ့။ ဝမ်းလျှောခြင်းကပုံမှန်ပဲဖြစ်တတ်ပြီး သင်သာဂရုစိုက်မယ်ဆိုပါက သင့်ကလေးကို ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်လို့ သင့်ဝမ်းလျှောခြင်းက ၂ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်ထိ ကောင်းမလာသေးရင် ကျန်းမာရေးအကြံဉာဏ်တွေရယူပါ။ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းဆိုးတဲ့ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ကြုံတွေ့လာရမယ်ဆိုရင် ၎င်းတို့ကတော့
-မူးခြင်း တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးရုံကို အမြန်ဆုံးသွားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်လို့ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပေမယ့် ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာစေဖို့အတွက် ပျောက်ကင်းစေသော
နည်းလမ်းအချိ ု့ကိုကြိုးစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ပြသနာတွေအတွက် သင့်ကလေးအကြောင်းကို တွေးလိုက်တာနဲ့ ခံစားရသက်သာစေလာမှာပါ။
Hello Health Group မှ ဆေးပညာ အကြံပေးခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသမှုပေးခြင်းများ မပြ ုလုပ်ပါ။
Diarrhea During Pregnancy. http://americanpregnancy.org/pregnancy-concerns/diarrhea-during-pregnancy/. Accessed February 25, 2017.
Is it normal to have diarrhea in late pregnancy?. http://www.babycenter.com/404_is-it-normal-to-have-diarrhea-in-late-pregnancy_2649.bc. Accessed February 25, 2017.
IBS During Pregnancy: What to Expect. http://www.webmd.com/ibs/features/what-to-expect-pregnant-have-ibs#2. Accessed February 25, 2017.